Dhageyso Ciidamada Mujaahidiinta Oo La Wareegay Deegaanka Warmaxan. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Ciidamada Mujaahidiinta Oo La Wareegay Deegaanka Warmaxan.
Iyadoo aroornimadii hore ee saaka ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin dagaal culus ku qaadeen deegaanka Warmaxan oo fariisimo ay ku lahaayeen maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ayaa waxaa soo baxayo warar dheeraad ah oo laga helayo dagaalkaasi.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in ciidamada Mujaahidiinta si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka’iyadoona maleeshiyaatka dowlada ay noqdeen kuwoo lagu dilay’lagu dhaawacay iyo tiro cagahooda ku baxsaday.
Saraakiisha ciidamada Mujaahidiinta ayaa goob fagaara ah kala hadlay shacabka ku dhaqan deegaanka’iyadoona Raayada Towxiidka laga taagay wadooyinka iyo goobo muhiim ah oo ka tirsan deegaanka Warmaxan oo dhaca wadada isku xirta degmooyinka Wallanweyn iyo Afgooye.
Sidoo kale gudaha iyo duleedka deegaanka Warmaxan waxaa daadsan meydadka maleeshiyaatka dowlada federaalka kuwaasi oo lagu dilay dagaalka saaka Mujaahidiinta ay kula wareegeen gacan ku heynta deegaankaasi.
Halkan Ka Dhageyso Xaaladihii Ugu Dambeeyay Ee Deegaanka Warmaxan.